Ama-Black Ops 3 Isnot Njengoba lwento Njengoba Previous COD Imidlalo	script Cookie kwemvume
Popular Posts Code Generator Google Play (Keygen)	ProKeygens Hack team ngokuziqhenya ngethule Code Generator Ithuluzi entsha futhi olusha Google Play .... Ubani Daddy Yakho CD Key Generator 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha Ubani Daddy Yakho CD Key Generator .... Test Drive Unlimited 2 Free CD Key Generator	Hey, we have a new tool for you, this time is Test Drive Unlimited 2 Serial Number Generator.... ARK: Survival Evolved Khulula umusi Code (Keygen)	Lokhu ARK khulula: Survival Evolved CD KEY Hack Kulula kakhulu ukusebenzisa ngenxa yesikhulumi elula ... S.W.I.N.E. Free CD Key Generator 2015	Thwebula S.W.I.N.E zakamuva. umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Pony Island CD Key Generator 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha Pony Island CD Key Generator .... Lokhu War of Thwebula Mine (Ikhodi aphambe)	Sethula kuwe entsha futhi olusha Lokhu War of Mine Keygen 2015…Sikhetha ukudala le War Lokhu Mine Keygen kuya h ... Syberia III CD Key Generator 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha Syberia III CD Key Generator .... Ukungcola Rally Game Trailer	Enye omkhulu PC game..Check zakamuva rally game ividiyo for Ukungcola Rally…
Ill ake u guys bazi ukuthi lowo mdlalo ngempela ... Eastside Hockey Manager CD Key Generator 2016	Thwebula yakamuva Eastside Hockey Manager ukhiye cd generator zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd .... Grim Dawn CD Key Generator 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha Grim Dawn CD Key Generator .... Intel: 50 Iminyaka Ngaphansi koMthetho Gordon Moores (IZINDABA)	Eminyakeni lengemashumi lasihlanu leyengca ngolunye usuku, Gordon Moore ezikhishwe ifayela Electronic kumadivayisi ncwadi osesikhundleni “Bekrema Ingxenye Ngini ... Assassins Creed Unity GOLD EDITION Free CD Key	Hello to all Assassin’s,especially for you all Assassin’s Creed gamers.... Mass Effect Andromeda Serial Generator Key	Download Mass Effect Andromeda ukhiye serial generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho .... Borderlands 2 CD Key uMdali 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha Borderlands 2 CD Key uMdali.. We anqume ukwakha le Borderlands 2 Keygen ukuze yena ... Ama-Black Ops 3 Isnot Njengoba lwento Njengoba Previous COD Imidlalo
Posted in Izindaba	2015-04-27
Ulwazi olusha uye ngempela egciwaneni for the oluzayo Call of Duty: Ama-Black Ops 3, Ngenxa out lokhu November for the aduduze indlu and PC. Lo mkhankaso single-player ukuthi ngokuvamile udlala bonke labo ezinkulukazi Hollywood blockbuster izikhathi nezikhathi ahlelwa impi ngeke kube njengalapho eqondile in Ops Black 3 njengoba kwakunjalo kwezinye izihloko odlule.
Game World iphathwe ukuze uthole imininingwane embalwa on the mode umkhankaso, embula ukuthi lesi sikhathi emhlabeni umdlali-uhlamvu– ejwayele lwenzeka ukuba bathule kulo langempela project Gameplay– empeleni abe indalo senzelwa manje. Abadlali ngokuqinisekile babe nekhono lokwenza owesilisa noma uhlamvu female kanye zihlanganyele nabanye abangane abathathu in the zokuqala Call phakade ezine-player wokubambisana of Duty umkhankaso isipiliyoni.
Now, ephathelene linearity langempela ngezigaba– Isiqophi game Planet ethatha kwenkululeko ukuchaza ukuthi ngenxa kokuba ezine-player co-op the game’ umkhankaso mode kuyodingeka ukuba basize ngemisebenzi yonke gamers amane ezindaweni ezinkulu okuningi. Benza, however, isimo ukuthi Treyarch uye empeleni waveza ukuthi siphelela ngokuzinikela ekwenzeni project ividiyo umdlalo ihlanganise more-abadlali abane ngokusebenzisa unezela izindlela ezingaphezu nokuxhumana isitha, nokuthi kuyoba ezinye indlela evulekile-endaweni Gameplay samanje. Uqinisile yini abazi ukuchaza uma lokhu kubonisa amabalazwe project ngokuqinisekile ibe seduze yini ngempela Call of Duty abalandeli zenziwa ukusetshenziswa kusukela ezine-player Zombies wokubambisana noma Spec ops izindlela, noma uma lokhu kusho ukuthi umdlalo isiqophi kuyoba Lubanzi like the ezine-player izindlela wokubambisana elidala ghost recon isiqophi imidlalo.
Call New of Duty Game Black Ops 3 Info
Something abazi aveze ukuthi AI in the game vidiyo empeleni bathuthukisa kakhulu nalokho babhekisela njengoba “Inhloso ngamakhasimende” design. Lokhu kubonisa ukuthi uhlelo computer oqondisa AI bezungeza futsi lenenjongo kanye an ngenhloso, mhlawumbe like nje “Director” in the Left 4 Dead isiqophi imidlalo, lapho NPCs ababephathwa kabusha ayekuhlosile futhi kuxutshwe begqoke izindlela inselelo ngisho gamers abanekhono kunabo.
Manje uma fretted ukuthi kusukela umdlalo manje isekela abadlali abane emkhankasweni ukuthi labo fantastic, ibhayisikobho eshisa izikhotha izibuko– ngokuvamile okuyisisekelo Call of Responsibility franchise– kuyodingeka bahambe ukuze anakekele gamers more, bakholwe once more. Treyarch owenza lapho cinematics kuyofakazela zenzeke okuvela komunye umuntu umbono ukuze wonke umuntu angabona ncamashi kwenzakalani noma uyigcine ne lokuqala umuntu umbono cinematic ukuthi ngokuvamile ukwenza ukusetshenziswa ukusiza ukutshela izingxenye esishukumisayo the Indaba.
Ngicabanga lokunengi indaba kuzodinga ukuba bagxile emhlabeni izinhlamvu asekelayo uma kufika isikhathi nokuchaza futhi uhlamvu zokuxhumana, like nje ukuthi izinto zilawulwa e kwamabhange GTA Online sika: Loafs Isimilo Umdlali umane uhlobo, ethule, nodding futhi pantomiming ngenkathi wonke umuntu owenza zonke ukukhuluma.
Ama-Black Ops 3 Isiqophi Trailer
Ukwakha umlingisi mode project kungaphezu nje ubuhle. Lo mdlalo isiqophi ozokunikela abadlali ithuba ukushintsha uhlamvu zabo njengoba kungabantu abangaphezulu kuka 40 ngcono various cybernetic. The izithuthukisi babizwa Cyber ​​Cores futhi basebenza ngendlela efanayo njengoba izithuthukisi in isiqophi imidlalo efana Deus Ex noma ngaphezulu Call yamuva imisebenzi: Advanced Warfare.
Abadlali futhi ukusebenzisa amasu team kanye namakhono basizane out on the zone combat, ezifana beqaphela okuhloswe for esele ozakwabo ukugxila umlilo, noma siphakamise ingozi ukuhlolwa kuyo yonke indawo eklanyiwe.
Call of Duty: Ama-Black Ops 3 kungenxa out lokhu November for Xbox, PlayStation and PC ezisekelweni. I qinisekisa sikwazi ukulindela ukubona futhi sithole okuningi uma E3 ugicita emhlabeni.
Tags: call of duty black ops 3, call of duty black ops 3 Gameplay, call of duty black ops 3 information, call of duty black ops 3 game entsha, call of duty black ops 3 Izindaba, call of duty black ops 3 video trailer	Related Posts: